चितवनमा मधुमेहका बिरामी बढ्दो | चितवन पोष्ट
चितवनमा मधुमेहका बिरामी बढ्दो
भरतपुर । अस्वस्थ खानपान र अपर्याप्त शारीरिक व्यायामका कारण मधुमेह रोग भयावह बनेको भन्दै चिकित्सक र जनप्रतिनिधिहरुले यसप्रति सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । बुधबार भरतपुरमा भएको मधुमेहसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीले स्वस्थ नागरिक बनाउनका लागि स्वस्थ खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मानव शरीरको प्यान्क्रियाज भन्ने त¤वले इन्सुलिन हर्माेन उत्पादन गर्न नसक्दा वा हर्माेनले काम गर्न नसक्दा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्न गई मुधमेहको असर देखा पर्छ । चितवनवासीमा पनि पछिल्लो समयमा मधुमेहका बिरामी बढ्दै गएको पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरका निर्देशक फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले बताए ।
मोटोपना, उच्च रक्तचाप र रगतमा बोसो भएका व्यक्तिमा मधुमेहको जोखिम ५० प्रतिशत बढ्ने डा. अधिकारीले बताए । मधुमेहका कारण मानिसको मुटु र रगतको नलीको रक्त सञ्चारमा असर गर्छ ।
‘विश्वका आधा मानिसलाई आफूमा मधुमेह छ भन्ने नै थाहा छैन, डा. अधिकारीले भने,‘चार जनामध्ये एक जनामा मात्रै मधुमेहसम्बन्धी ज्ञान भएको जानकारी दिए पनि समस्या समाधान हुनसक्छ ।’
मधुमेहबाट बच्न खानामा कार्बाेहाइड्रेड घटाउनुपर्ने, प्रोटिनयुक्त र रेशादार खानेकुरा खाने, जंकफुट पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्ने र बिहानको तुलनामा बेलुकीको खाना कम हुनुपर्ने डाक्टरहरुको सुझाव छ ।
मधुमेह समाज चितवन, पुष्पाञ्जली हस्पिटल, मधुमेह स्वयंसेवक समाज, लायन्स क्लब अफ पटिहानी, भरतपुर चौतारी, नारायणगढ संगमचोक र नारायणगढ संगमचोक सञ्जीवनीले कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् ।
पुष्पाञ्जली हस्पिटल मधुमेह स्वयंसेवक समाज चितवनका अध्यक्ष कालीशंकर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधुमेह समाज चितवनका अध्यक्ष केशव देवकोटा, लायन्स डिस्ट्रिक्ट ३२५ बीटुका पूर्वगभर्नर घनश्याम भट्टराई, मधुमेही तारा रिमाल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । विश्व मधुमेह दिवसको यस वर्षको नारा ‘परिवार र मधुमेह’ रहेको छ ।
त्यसैगरी विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा बुधबार भरतपुरमा लायन्स क्लब इन्टरनेशनल रिजोन २३ अन्र्तगतका ८ वटा लायन्स क्लबहरुले भरतपुरमा आयोजना गरेको निःशुल्क मधुमेह शिविर तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा खानपिन, व्यायाम र जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन अत्यन्तै जरुरी भएको बताउँदै फिजिसिएन डा. जयराम अधिकारीले यसलाई हेलचक्राई नगर्न सबैलाई सुझाव दिएका छन् । मधुमेहकै कारण आँखाको ज्योति गुम्ने, मृगौलामा समस्या आउने, मुटुमा समस्या आई हृदयघात हुने शरीरमा घाउ भएमा कहिल्यै सन्चो नहुनेजस्ता समस्या आउने उनले बताए ।
सो कार्यक्रममा २६७ जनाको निःशुल्क मधुमेह परीक्षण गरिएको थियो । मधुमेह भएका ९२ जनालाई फिजिसियन डा. जयराम अधिकारीले परामर्श दिएका थिए । भरतपुरमा रहेको सीआरएल ल्याबले निःशुल्क रगत परीक्षण गरेको थियो । कोयस्ट फर्मासिटिकल्सले निःशुल्क औषधि वितरण गरेको थियो ।
कार्यक्रम रिजोन चियर पर्सन भक्तिप्रसाद चालिसेको सभापति¤वमा सम्पन्न भएको थियो ।